Hovik Keuchkerian, mutambi, wekare-mutambi wetsiva, munyori uye mudetembi. | Zvazvino Zvinyorwa
Hovik Keuchkerian mabhuku
A Hovik keuchkerian (Beirut, 1972), kunze kwezita rayo risingafungidzike, ikozvino rave kuzivikanwa se mutambi uye simuka-kumusoro munyori. Asi vateveri vemitambo vachaziva kwazvo kuti Keuchkerian aive wetsiva elite, heavyweight shasha yeSpain muna 2003 na2004. Nekudaro, uyu mwanakomana wababa veArmenian uye amai vekuSpain, zvakare munyori uye nyanduri. Uye zvakakodzera kutarisa.
Nzira yake, nekukurumidza sekusiyana, iri kuzadza ne kubudirira uye kurumbidzwa. Uye Keuchkerian akamira pane yakakosha saiti mu tsika panorama kwete nyika chete, asiwo nyika dzese. Kune avo vedu vane chimwe chidakadaka chemazita ichocho usavimba nechitarisiko, tinowana mu Hovik keuchkerian muenzaniso wakanaka. Chimiro chinotaridzika uye mweya wenhetembo. Mubatanidzwa unogara uchikwezva.
Yakanaya zvishoma kubva mamonologue paParamount Comedy, uye kubva pavakakurumbira cocretes. Izvi zvaizokurudzira yako yemitambo show Mupemhi ane shangu dzedonje, pabhajeti yemwaka mitatu paGran Vía yeMadrid. Yakanaya zvakare kubvira iye Sandro, mu Hispania iyo ngano, kwandakaiwana. Uye kusasa zvinoonekwa mukati Hushumiri hwenguva o Isabel. Parizvino anogona kuonekwa mu cinema, achirova mhangura naMichael Fassbender kana Jeremy Irons mukati Assasins dzidziso.
Cinema, zvikabudura, monologue, terevhizheni ... Uye iyo theatre. Pasina kupokana aive nematafura mushure mekushanya matanho ehafu yeSpain nevarume vake. Parizvino iri mu Canal Theatre (kusvika Ndira 29) basa ra Wajdi Mowawad, zvakare weLebanese mavambo, A howitzer mumoyo, iyo yaakange amiririra muna2014.
Zvinoenderana nebhuku rekutanga raMouawad, iri basa inyaya yezvinoitika kune protagonist panguva yehusiku humwe, panguva yekuchinjirwa kuchipatara kwaamai vake vanorwara nekenza. Munguva iyoyo, protagonist anoyeuka a Unofara hudiki kuti vakamubira. Inotaura zvakare nezve iyo kurasikirwa, kubva kutiza kubva kuRebhanoni nekuda kwehondo yevagari vemo. Munyori, uye zvakare mutambi, nezviitiko zvakafanana zvehupenyu, bvisa zvese ruvengo nekutsamwa izvo zvinoungana.
Zvisinei, hapana chinoratidzika kuramba Hovik Keuchkerian. Chokwadi kana iyo literatura.
Mukubvunzurudzwa kuchangobva kuitika Keuchkerian akaziva chaizvo, uye nekuseka, izvo zvishoma zvinoonekwa kutaridzika kwanyanduri kwaakapihwa. Asi zvinoitika kuti anga achinyora kwenguva yakareba uye atove Mabhuku mana Yakaburitswa, yekupedzisira, bhuku-disc yemagwaro ake akaverengwa naye uye ichiperekedzwa nemumhanzi.
Tsamba kubva kuEl Palmar yakanga yakanyorwa pamhenderekedzo yeCadiz yeEl Palmar de Vejer uye ndiyo zvimwe zvekare ngatitaurei zvine hungwaru maererano nechimiro uye nezviri mukati.
kupenga, zvakadaro, ndizvo kwakawanda kuyedzal mune fomati. Icho chiri nezve rwendo kuburikidza nekuziva uye zviroto zvine zvepasirese madingindira erufu, hupenyu, mafaro kana kutambura.
Makore mana gare gare anodhinda Diaries uye ravings, mubatanidzwa wevamwe Nhetembo zana nemakumi mashanu, nyaya pfupi uye aphorisms kune chikamu chikuru, izvo zvinoumba iwo madhiariari. Anoenderera mberi nekufungisisa nezve chimiro chevanhu muzvinyorwa zvinosanganisa uye zvinosanganisa kuseka, unyoro, kuseka uye yakawanda yekushamisa pfungwa. Iri bhuku kuratidzwa nemutambi Irene Lorenzo.
Muna 2014 anoburitsa izvo kusvika parizvino zita rake rekupedzisira, Resilient, iro bhuku-dhisiki raakange achitaura nezvaro uye kwaakatizve achishamisika nenzira yake chaiyo yekunzwisisa mabhuku uye hupenyu. Resilient meshes zvishoma nezwi uye chinangwa che Diaries uye ravings. Asi zvinonyanya kudetemba uyezve nekuda kwekuyedza nekutenda kumimhanzi yaYuri Méndez. A multimedia basa, bhuku rinogona kutererwa kana CD rinogona kuverengwa. Muenzaniso mutsva wekushomeka kweiyi yakawanda-yakatenderedzwa zvese-kutenderera.
Tsamba kubva kuEl Palmar (Edhisheni Sinmar, 2005), yakasarudzika muunganidzwa wenhetembo.
kupenga (Adeire, 2008), chinyorwa cheprose.
Diaries uye ravings (Ndiverengere, 2012), nyaya pfupi nezvezvakasangana nezvako.
Resilient (Ndiverengerei / Lovemonk, 2014), muunganidzwa wenhetembo.
Inogona sei kuwanikwa zviso zvakawanda zvinonakidza yezvakawanda Hovik Keuchkerian.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Hovik Keuchkerian, mutambi, wekare-mutambi wetsiva, munyori uye mudetembi.
"La Celestina", iro rinonyanya kukosha basa rezana ramakore regumi nemashanu
10 ngano pamusoro pevanyori vari vechokwadi (uye venhema)